Isobho nge pearl ibhali
Indlela diversify yokudla nsuku zonke futhi wenze itafula mnandi? Isobho - kungcono ngendlela emangalisayo ewusizo for kokudla esiswini isidlo, futhi pearl ibhali kunomthelela ekuthuthukiseni umsebenzi pheshana emathunjini. Ngakho-ke, kunengqondo ukuthi abantu abaningi lafika sihlanganise mikhiqizo ezimbili ewusizo ndawonye. Nawa ushiye ukuthola iresiphi ofanele bese upheka isobho nge pearl ibhali. Sisho ukuthini uma sithi "okupheleleyo"? Eyengeziwe ngalokho izolandela.
Ziningi abaphikisa pearl zebhali, ngoba akulula ngempela ukulungiselela. Iqiniso lokuthi kuba okokuqala kudingekile ukuba cwilisa emanzini. Abaningi isikhathi esikhululekile ngoba ngaleyo ndlela ukuzincisha ukuphumula omunye cereal ziwusizo ikakhulu equkethe esiningi amaminerali namavithamini edingwa umzimba ukuze ukusebenza evamile.
Ngakho, into eyinhloko ezibalulekile izifiso zakho siqu. Ufuna isobho lase inyama noma imifino? Ngaleso yisiphi isikhathi sosuku nithatha njengophawu ukudla: ekuseni noma ntambama? On ezinye izitsha ikhalori wena ulindeleni?
Ngokuvamile, ezweni lethu senzé isobho eyodla njengoba ukudla kuqala. Uma unamathela le siko, kufanele usebenzise iresiphi elandelayo ukupheka isobho okunomsoco nge pearl ibhali.
Ukuze wenze lokho, udinga isethi eminye imikhiqizo, okuyilezi: pearl ibhali - 2 wezipuni yenkomo - 300 g, anyanisi - 3 izicucu, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi - 1 impande elincane, amakhambi ukunambitha, usawoti kanye pepper iyafana, izaqathe - 1 ucezu, parsley 1 kweqembu.
Ukupheka isobho nge kakolweni okusanhlamvu kufanele zibe izigaba. Cwilisa pearl ibhali amahora amathathu ngamanzi abilayo, bese ukupheka. Uma ungenalo cwilisa nebhali, kuyoba nzima. Lokhu kuyiphutha abapheki imfundamakhwela, zama ukukugwema. Ngaphambi sifakwe emanzini pearl ibhali kumelwe sihlanzwe.
Yenkomo uthathe yizicucu amancane, gazinga ku amafutha sunflower, bese engeza inyama eliphekwe nebhali uqhubeke upheke.
Kuze kube uqweqwe iphekwe, kubalulekile ukwengeza izaqathe vukuza, parsley oqoshiwe, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi ogayiwe. Anyanisi kudingeka Fry sunflower noma amafutha omnqumo, enezele isobho nge pearl ebhali kwamaminithi ambalwa kuze ukudla okuphekwe. Salt, pepper kanye nezinye seasonings wengeze futhi ngqo phambi ukupheka. Khona-ke ukunambitheka kuzozwakala kabanzi babazi.
Uma ufuna ukwenza isobho nge pearl ibhali, okuyinto sengilungisile wena ngokugcwele kubhekwe isidlo ohlwini ukudla okunempilo, kufanele silinganisela isinongo usawoti. Futhi inyama kungcono ukuthatha yesikimu.
Phesheya, abaningi kudliwa for sasekuseni noma iphalishi noma isobho. Dish ngesidlo sasekuseni kufanele kube lula, kusukela esiswini ongakabi sengivuswa. Ngakho-ke, kulesi simo, inyama esitsheni akukuhle ukwengeza. Pearl ibhali isobho, nawe ungadla ekuseni, ungakwazi uzilungiselele ngokusho iresiphi, okuyinto thina ocashunwe ngenhla. Sebenzisa zonke izithako ngaphandle inyama.
Isobho nge pearl ibhali, okungase kudliwe futhi inyama, yenziwa kusukela pearl ibhali kanye amakhowe. Mushrooms - ukudla esindayo, ngakho-ke lokhu isobho futhi kangcono ukudla kwasemini.
Ukulungisa isobho, pearl kwebhali isikhunta udinga imikhiqizo efana yemifino umhluzi we 2 amalitha, 100 g omisiwe amakhowe amhlophe, 2 izinkomishi ukhilimu omuncu 1 inkomishi pearl ibhali, usawoti kanye pepper, amakhambi behlobisa 3.5 izinkomishi amanzi ashisayo 2 wezipuni kafulawa.
Amakhowe cwilisa emanzini ashisayo ihora. Pearl ibhali cwilisa amahora ambalwa. Beka sikadali pearl zebhali, ivuse ihora. Amaqhafuqhafu usike amakhowe.
Ufulawa, ukhilimu omuncu uhlanganise umhluzi, ke uthele ingxube ngokucophelela ibe mass nge pearl kwebhali umpheki, engeza amakhowe kuya efanayo. Bilisa bese wengeza isinongo.
Ngokucophelela ushizi isobho: iresiphi
Recipe of utamatisi isobho nge kwasolwandle, noma ubhontshisi
Isobho zezinhlanzi: zokupheka
Indlela apheke ze-Chowder isobho?
Biography: Ayshvariya Ray. Odlule wayo Nezanamuhla
Masaru Emoto futhi ucwaningo lwakhe
Indlela ukuchitha iholide lakho eMoscow
Cesme Church - isakhiwo yezakhiwo esiyingqayizivele